I-Huawei Mate 9 Pro enescreen egobile ngoku isemthethweni | Iindaba zeGajethi
Izolo sikubonise imifanekiso emininzi ehluziweyo yento ebonakala ngathi yeyiyo I-Huawei Mate 9 Pro, Inguqulelo entsha yeflegi yomenzi waseTshayina eya kuthi ijoyine iMate 9 kunye neMarte 9 Porsche Design esele sidibene nayo kwiintsuku ezidlulileyo kumnyhadala wentetho owawuhlelwe nguHuawei. Into esingazange sayicinga kukuba kwiiyure nje ezimbalwa kamva siza kwazi ukufika ngokusesikweni kwemarike yale nguqulo intsha yeHuawei Mate 9.
Njengoko besibona izolo, kwaye kwakhona namhlanje, kwimifanekiso ye-smartphone entsha, kuphela kweenkcukacha zotshintsho kuyilo, ngokufakwa kwescreen esigobile. Ezinye iingcali sele zichaze le Huawei Mate 9 Pro njenge Inguqu yexabiso eliphantsi ye-Huawei Mate 9 Porsche Design. Ezinye iingcali ezinjengam zibona kwesi sixhobo isiphelo sendlela esifana kakhulu nomda weGPS S7.
Okokuqala, siza kuvavanya eziphambili Iimpawu kunye nokubalulwa kweHuawei Mate 9 Pro entsha;
Imilinganiselo: 152 x 75 x 7.5 mm
Ubunzima: 169 gram
Bonisa: 5,5 intshi nge-2560 × 1440 resolution px kwaye curved
Inkqubo: I-Kirin 960 ene-8 cores kwi-2.3 kunye ne-1.8 GHz
I-GPU: Mali-G71 MP8
I-RAM: 4 GB okanye i-6 GB LPDDR4
Imemori: I-64 GB okanye i-128 GB enokwandiswa kuzo zombini iimeko ngamakhadi e-MicroSD
Ikhamera yangemva: inzwa emibini ngozinzo lwe-optical kwaye ityikitywe nguLeica, umbala we-12 megapixels kunye nee-megapixels ezingama-20 b / w
Ikhamera yangaphambili: ii-megapixels ezi-8
Ibhetri: 4.000mAh ngentlawulo ekhawulezayo
Inkqubo yokusebenza: I-Android 7.0 Nougat ene-EMUI 5.0 yolungelelwaniso lwendlela
Ukunxibelelana: Uhlobo lwe-C C 3.0, umfundi weminwe kunye neNFC
Le nguqulo yesithathu yeHuawei Mate 9 ayinanto yakwenza nomnye komnye, kunye nakwesiphi na isixhobo ekuthiwa yimakethi ephezulu. Ukusebenza kukwangaphezulu kokubulela okuqinisekileyo kwiprosesa yaseKirin 960 echazwe nguHuawei njengeyona processor iphucukileyo kunye neyona inamandla kwintengiso, ibetha phantse zonke izitha, ngaphandle kwe-A10 ka-Apple.
Ukufumaneka kwale Huawei Mate 9 Pro kusalinde isiqinisekiso esivela kumenzi waseTshayinaoy kukuba amanye amarhe abonisa ukuba inokufumaneka kuphela e-China, nangona ingamangalisa ukuba ayifikanga eYurophu ngenxa yomdla wayo omkhulu kwinani elikhulu labasebenzisi.
Ngokumalunga nexabiso, iya kusondela kuleyo ikunye neHuawei Mate 9 kunaleyo yoyilo lwePorsche.
Apha sikubonisa ifayile ye- Amaxabiso ezi nguqulelo zimbini zeHuawei Mate 9 Pro eziza kubakho kwintengiso;
IHuawei Mate 9 Pro ene-4GB ye-RAM + i-64GB iROM: 4699 yuan (€ 632)
IHuawei Mate 9 Pro ene-6GB ye-RAM + i-128GB iROM: 5299 yuan (€ 713)
Ucinga ntoni ngale Huawei Mate 9 Pro intsha?. Sixelele uluvo lwakho kwisithuba esibekelwe amagqabantshintshi kule posi okanye ngayo nayiphi na inethiwekhi yoluntu apho sikhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-Huawei Mate 9 Pro enescreen egobile ngoku isemthethweni
Iifowuni zevidiyo kwi-WhatsApp ngoku ziyafumaneka kuye wonke umntu